Andramasina – Manandriana – Fandriana: bokin-tany anarivony maro nozarana amin’ny tompony | NewsMada
Andramasina – Manandriana – Fandriana: bokin-tany anarivony maro nozarana amin’ny tompony
Natomboka, ny 4 septambra, ny fizarana bokin-tany (titre), raha ny fanazavana avy ao amin’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany, mba ho voasoratra ara-dalàna amin’ny tompony ny taniny.
Tantsaha avokoa ny 90 % mivelona amin’ny fambolena sy ny fiompiana any Andramasina. Tena antom-piveloman’ny mponina sy fidiram-bola ho azy ireo izany. 740 bokin-tany nozaraina ao amin’io tanàna io, voakasika mivantana ny fokontany Mandrosoa, Ambika. Nitohy tany Manandriana ny fitsidihana nataon’ny minisitera, ny faran’ny volana oktobra teo. 1 000 ny bokin-tany nozarana any an-toerana, ao amin’ny kaominina Lanjana. Fanamby napetraky ny sampana fananan-tany: “Hampifamatorina amin’ny taniny ny Malagasy”.
Efa nanaovana toy izao ny any amin’ny distrikan’i Fandriana, nizarana bokin-tany 8 521 ao amin’ny kaominina Tsarazaza, ny kaominina Miarinavaratra, ny kaominina Tatamalaza ary ny kaominina Betsimisotra. Nitarika ny fotoana tamin’izany ny minisitry ny Fanajariana ny tany, Razanamahasoa Christine, sy ireo tompon’andraikitra ao amina sampandraharaha samihafa. Nomen’ny minisitera moto ny mpiasan’ny fananan-tany ao Fandriana ho fanohizana sy fanafaiganana ny asan’izy ireo.
Fananana bokin-tany, midika harena mipetraka, koa laharam-pahamehana satria be loatra ny hosoka sy ny halatra tany miantraika any amin’ny tena tompony. Misy lalàna tokony havaozina momba ny fananan-tany eto amintsika fa antitra loatra. Olana manokana ny mianjady amin’ny tsy manam-bola amin’ny didy tsy ara-drariny avoakan’ny fitsarana, matetika, ka ny tompon-tany indray no very tany.
Mitohy ny hetsika fizarana bokin-tany faobe amin’ny faritra maro eto amin’ny Nosy. Tanjona ny fanomezana antoka ireo tompony hisorohana ny olana eo anivon’ny fianakaviana sy ny fitsarana.